Thwebula Rainmeter 4.0.0.2746 beta – Vessoft
Rainmeter – a isofthiwe sibonise ukusebenza system kanye nomklamo of bekhompuyutha. Isofthiwe ikuvumela ukubuka ubungako esetshenziswa and free inkumbulo, isamba disk kanye inkumbulo virtual, umthwalo igrafu processor central, usuku zamanje kanye nesikhathi, ulwazi sezulu njll Rainmeter kwenza ukubuka ulwazi inethiwekhi, kuhlanganise IP kanye nekheli DNS, traffic nesivinini iziteshi ukusetshenziswa. Isofthiwe futhi likuvumela ukuba ahlole okuqukethwe ebhokisini leposi, ukubuka opholile izindaba bese ukulawula isidlali semidya. Rainmeter iqukethe amathuluzi amaningi oyifisayo amakhono software design and bekhompuyutha.
Display of ukusebenza uhlelo
Amandla ukudizayina desktop
Amazwana on Rainmeter:
Rainmeter Ahlobene software:
English, Español, Deutsch, 中文... BearShare 12.0.0.135802
-Internet The isiphequluli kuthambekele ukufinyelela elula popular amanethiwekhi omphakathi. Futhi isofthiwe ibambisene imisebenzi inkonzo Mail.Ru Group.
English, Français, Español, Deutsch... AIDA64 Extreme 5.80.4000 Standard futhi Portable